डेपुटी सीईओ छनौटमा ज्योतिको गाईजात्रा ! « Jana Aastha News Online
| Thu Dec92021
एमालेकेपी ओलीकोरोनानिषेधाज्ञानेकपा एमालेनेपाली कांग्रेसपक्राउप्रधानमन्त्रीसंक्रमणसर्वोच्च अदालत
डेपुटी सीईओ छनौटमा ज्योतिको गाईजात्रा !
प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७७, आईतवार ११:४८
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई एकपछि अर्को संस्थाले टेर्न छाडेका छन् । उनीहरुले केन्द्रीय बैंकका नीति र निर्देशनलाई नजानिँदो किसिमले धोती लगाइदिएका छन् । पहिले ठूला र प्रभावशाली वाणिज्य बैंकहरूले यदाकदा गर्ने त्यस्तो काम अहिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत गर्न थालेका हुन् । पछिल्ला दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई लत्याउँदै आफू अनुकूलको निर्णय गर्न थालेको बताइन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनलाई ‘अचार’ बनाएको ज्योति विकास बैंकले फेरि एकपटक उसको निर्देशन विपरितको काम गरेको छ । तर, नियमनकारी निकायले हालसम्म ज्योतिको विशेष निरीक्षण गर्ने,पत्र मार्फत् सोधखोज गर्ने त धेरै टाढाको विषय फोनबाट समेत सोध्ने आँट नदेखाएको स्रोतको दाबी छ ।
ज्योतिमा रिक्त डेपुटी सीईओ छनौटको लागि एउटा कमिटी बनाइएको छ । कमिटीमा सीईओ श्रीचन्द्र भट्ट संयोजक छन् भने चिफ बिजनेश अफिसर रामहरि आचार्य र चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर बलदेव थापालाई सदस्य बनाइएको छ । सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाँहि थापा पदीय रूपमा पनि डेपुटी सीईओभन्दा दुई तह मुनिका कर्मचारी हुन् । तलको कर्मचारीलाई छनौट कमिटीमा राखेर दुई तहमाथिको डेपुटी सीईओ नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न खोज्नुलाई ज्योतिका कर्मचारीले नै ‘खरिदारको सिफारिशमा सचिव नियुक्त गर्न खोजिएको’ अर्थ लगाएका छन् ।
हुन तः बैंकले डेपुटी सिईओ नियुक्त गर्न खोजेको डेपुटी जनरल म्यानेजर पारसराज कँडेललाई नै हो । अर्का उम्मेदवार बैंकका चिफ रिस्क अफिसर सुशीलकुमार शर्मा हुन् । थापाचाँहि कँडेल,शर्मा र आचार्यभन्दा पनि मुनिका कर्मचारी हुन् । तहगत रूपमा कमिटीमा राख्न नमिल्ने कर्मचारी भएपछि सीईओ भट्ट र आचार्य मात्र रहेको दुई सदस्यीय सिफारिश कमिटी बनाउँदा पनि कानुनतः मान्य हुने राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखा स्रोतले बताएको छ । तर,कँडेललाई जसरी पनि डेपुटी सीईओ बनाउनुपर्ने भएकाले कनिष्ठ कर्मचारीलाई कमिटीमा राखिएको अड्कल लगाइएको छ ।
स्रोतकाअनुसार कँडेलको शैक्षिक योग्यतामाथि लामो समयदेखि प्रश्नचिन्ह उठ्दै आएको छ । यसअघि तेस्रो नम्बरमा रहेका उनलाई कायम मुकायम सीईओको जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्र बैंकले कैफियत लेख्नसक्ने आंशकामा बोर्ड बैठकमा राम्रैसँग कुरो उठेको थियो । तर,कँडेलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्बन्ध ‘अच्छा’ रहेकाले केन्द्रीय बैंकसँग ट्युनिङ्ग मिलाउने आफ्नो दक्षता,क्षमता र जिम्मामा शङ्का नगर्न भनेपछि अधिकांश बोर्ड सदस्यहरू त्यतिबेलै दङ्ग परेका थिए ।
पारसले नेपालमा दश जोड दुई पासपछि भारतबाट चार्टर्ड एकाउण्टटेन्सी गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र पनि पाएका छैनन् । उनको योग्यतालाई हाम्रो विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरको मान्यतासमेत नदिएको ज्योतिका एकजना कर्मचारीले बताएका छन् ।
अब जापानमा बिबाह गर्न विपरित लिङ्गी नचाहिने
ट्राफिक कारवाहीमा परेका कागजात लिन अब लाइन लाग्नु नपर्ने
घरेलु खाजा नखुवाउने विद्यालयलाई सरकारको चेतावनी
कालोसूचीमा अरु कैयौं पप्पुहरु
काँग्रेसको खातामा दश करोड
भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता, कति होला सार्थकता ?
प्रेस युनियनबाट महाधिवेशनमा आउने पाँच जनाको नाम फाइनल
कोदोको माग बढ्यो, किन होला ?
गुरुहरुलाई स्थायी गराउने निर्णयप्रति विद्यार्थीहरु रुष्ट
अबको दुई हप्ता देशलाई झन् अप्ठ्यारो
माधवको कार्यकक्षमा प्रचण्ड र बाबुराम
कहिले हाँस्ने पालो, कहिले रुने पालो
प्रधानमन्त्री-पत्नी नै भिडेको अडियो प्रमाण
श्रीमानहरु सिरक नछाड्दै अड्डामा,भन्न थाले ‘के भाउँतो आइलाग्यो नि !…
© 2021 सर्वाधिकार शुरक्षित Jana Aastha News Online